Tena satana ve ny fomba fiaina LGBT?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tena satana ve ny fomba fiaina LGBT?
Mpanoratra George Taylor
Ny Fanjakan'i Eswatini dia firenena tsara tarehy manana soatoavina faran'izay konservativa ary fantatra amin'ny anarana hoe Swaziland.
Ao Eswatini, ny eSwatini Sexual and Gender Minorities (ESGM) dia natsangana ho iray amin'ireo vondrona mpiaro vitsivitsy manohana ny fanekena ara-dalàna sy fiarovana ny olona LGBT + ao amin'ity fanjakana afrikana ity.
Tsy ara-dalàna ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy ao Swaziland (eSwatini) ary ny olona LGBT + dia miatrika fanavakavahana sy fanorisorenana fatratra, amin'ny ampahany noho ny tsinin'ny VIH / SIDA. Ny fanjakana mpandala ny nentin-drazana dia ny Mpanjaka Mswati III izay namaritra ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy ho "satana".
Saingy ny fikambanana ankehitriny dia miady ny hisy taorian'ny nandrarana azy tsy hisoratra anarana amin'ny fisoratana anarana amin'ny orinasa ny volana septambra tamin'ny taon-dasa.
Araka ny Afrika rehetra, nanamafy ny fisoratana anarana fa tsy ara-dalàna ny tanjon'ny ESGM satria tsy ara-dalàna ao amin'ny fanjakana ny fanaovana firaisana ara-nofo eo amin'ny samy lahy na samy vavy. Ny zon'ny fitoviana dia tsy mihatra amin'ny olona LGBT +, hoy ny mpiraki-draharaha satria ny firaisana sy ny firaisana dia tsy voalaza mazava ao amin'ny lalàm-panorenan'i eSwatini.
Nentin'ity vondrona ity tany amin'ny fitsarana avo indrindra ny firenena satria mihantsy ny fanapaha-kevitry ny mpiraki-draharaha, ary nanamafy fa ny fandavan'ilay mpitan-tsoratra dia nanitsakitsaka ny zon'ny mpikambana ao amin'ny ESGM hanana fahalalahana, hifanerasera sy haneho hevitra an-kalalahana, hitondrana mitovy ary tsy hanavakavahana. Nambaran'izy ireo fa diso naneho ny lalàna ny fisoratana anarana ary ny fandavany hisoratra anarana ESGM dia nanitsakitsaka ny zon'ny lalàm-panorenan'ny mpikambana ao aminy.
Olona LGBT any Eswatini no miatrika fanavakavahana sy fanorisorenana eo amin'ny fiaraha-monina matetika. Araka izany, misafidy ny hijanona ao anaty efi-tranony ny ankamaroany na hifindra any Afrika Atsimo akaiky azy, izay ara-dalàna ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy. Ho fanampin'izany, ny olona LGBT + dia miatrika tahan'ny tsimokaretina VIH / Sida avo be. Eswatini no manana ny tsimokaretina VIH avo indrindra eto an-tany, ary voalaza fa 27% -n'ny mponina Swati no voany).
Na eo aza izany rehetra izany dia natao ny volana jona 2018 ny filaharam-be voalohany nataon'i Eswatini.
Ny sidina avy any Frankfurt dia manohy any amin'ny toerana malaza maro
Fampitomboana ny fifandraisana sidina avy any Munich aorian'ny fisokafan'ny Terminal 1